Fireworks နှင့် ပတ်သတ်သောရှာဖွေမှုရလဒ်ZEKKEI Japan(1/2)
As one of the traditional charms of the Japanese summer, fireworkｓ festivals are held throughout the country during July and August. In the big cities, the festivals can get terribly crowded, so you just might findareal gem ofarural fireworks festival off the beaten track. Make sure to try the street food of Japan from one of the many open-air stalls found at the show.
စက်မှုလုပ်ငန်းမြို့ ၊ယောခမြို့ တွင် ယောခမြို့ ဆိပ်ကမ်း၏ ပင်လယ်လိုင်းတစ်လျှောက် ရေနံဆီနှင့်ပတ်သတ်မှုကို အဓိကအနေဖြင့် လုပ်ထားသောစက်ရုံများစ...
တစ်နိုင်ငံလုံးက မီးပန်းပညာရှင်တွေ စုစည်းပြီး အနုပညာအရည်အသွေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးတွေကို အစွမ်းကုန်ပြသတဲ့ မီးပန်းတွေကို ပစ်လွှတ်ပြတာဖြစ်တ...
ဒိုင်းဘ၊ အာအိုးမိ၊ အာရိအာခဲ ဧရိယာသုံးခုကနေ ဖြစ်လာတဲ့ နေရာပါ။ လိင်ဖြေဖျော်ရေးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အဆောက်အဦးတွေ ၊ များစွာသော ပျော်ရွှင်ပွဲတော်တေ...
အမြင့် ၆၃၄ မီတာရှိတဲ့ မြေပေါ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လွှင့်မှုအသုံးပြုတဲ့တာဝါ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ဖွင့်လှစ်လုပ်ဆောင်ပြီး မျှော်စင်ကို အဓိကထာြး...